Ime ụlọ nnụnụ Ryningen | Nleta Hultsfred
hem » 🥾 Hụ & mee » 🎟️ Mmasị » 🌲 Nchekwa okike » Nnụnnụ ụlọ Ryningen
Ryningen bụ otu n'ime ala mmiri gbara okirikiri nke dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Sweden. Ihe dị ka hectare 300 dị na mpaghara n'etiti Hultsfred na obodo Högsby ebe a pụrụ ịhụ ọtụtụ ụdị nnụnụ. Enwere ike inweta uzo di nfe na ulo elu nnunu abuo, ikpo okwu, ebe ndi na-adọba ụgbọala, ụzọ na akara ama.
Mpaghara ahụ nwere mmiri mmiri sara mbara ebe Emån na iyi mmiri ndị ọzọ na-asọba mgbe ụfọdụ ahịhịa ndụ, ebe a na-egbute nri ụmụ anụmanụ n'oge oyi. Site na ịgbada n’Ọdọ Mmiri Ryningen na 1887, ala ubi na ala ahịhịa ndị ọzọ bụ nke e kere eke. Embankments ndị na-adịbeghị anya emeela ala na-aga n'ihu na mpaghara ndị ọzọ.
Ihe owuwu mmiri nke oge a na Emån bụ ihe ruru ihe ruru. 200 hectare nke ahịhịa mmiri mmiri nke na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ na cattails, nke a ka na-azọrọ site n'enyemaka nke nri nri na ụfọdụ ịkọ. Ebe ndị dị na ndịda ọwụwa anyanwụ bụ ebe tojuru etoju ebe willow shrubbery na ọbụna ahịhịa amị na-agbasa. Afọ mgbe Emån idei mmiri na-emebu mmiri mmiri na-eleghachi anya azụ n'otú Emån si jupụta mpaghara niile.
Ala oke ohia gbara gburugburu site na Emån bụ nke ahịhịa na agwa agwakọtara. Oke ohia Aspen juputara na oak bu ndi anakoro na ebe okacha ochie na eme na Ryningsnäs na north.
Na mgbakwunye na ịbụ ebe nsọ nnụnụ pụrụ iche, enwerekwa ọtụtụ ụmụ ahụhụ na-adịghị ahụkebe na mpaghara ahụ.
Nkewa Ryningen dị ka mpaghara Natura 2000 wee weghachite ya n'oge 1990 mgbe ewepụrụ ákwà mgbochi na osisi. Ọzọkwa, ahịhịa kpakpando na anụ ndị na-ata ahịhịa na-eme ka rotor-milled ma hapụ ya na ahịhịa, nke mere ka ebe ahụ bụrụ ihe mara mma maka ndụ nnụnụ.
Agba ọhụrụ, 570 84 Mörlunda, Sverige
2022-02-04T13:47:06+01:00Åda Bird na-ekiri|
2022-02-08T09:09:26+01:00Åda Bird na-ekiri|
Ime ụlọ nnụnụ niile